Nosy Sardinia: Faritra fotsy tokana any Italia
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Italia » Nosy Sardinia: Faritra fotsy tokana any Italia
Mba hiarovana ny mari-pamantarana faritra fotsy saro-pantarina momba ny fiarovana COVID-19, ny nosy Sardinia dia hampihatra drafitra fanaraha-maso henjana sy lalàna manohitra ny virus amin'ny fidirana ao amin'ny faritra.
Manomboka amin'ny herinandro ambony dia mety hiditra ao Sardinia ihany ny mpandeha raha efa vita vaksiny sy voasedra ratsy ho an'ny COVID.
Amin'izao fotoana izao, ny fitsapana swab natao rehefa tonga tany amin'ny toerana itodiana any Italia dia mety hatao an-tsitrapo.
Ny governoran'i Sardinia Christian Solinas dia mino fa ny vahaolana amin'ny fitazonana tontolo iainana azo antoka dia ny fametrahana pasipaoro fanaovana vaksiny.
Sardinia no faritra fotsy any Italia ary tapa-kevitra ny hitazona an'ity firaketana fiarovana ity. Raha mbola mihazakazaka ny COVID-19 ary ny sisa amin'i Italia dia manakaiky "amin'ny dingana lavitra mankany amin'ny faritra mena" - araka ny nambaran'ny filohan'ny fiarovana sivily teo aloha sy ny mpanolo-tsaina Lombardy ankehitriny, Guido Bertolaso ​​- ny nosy Sardinia dia nifindra avy amin'ny faritra mavo mankany amin'ny fotsy izay midika fa ambany ny loza ateraky ny Coronavirus.
Manomboka amin'ny herinandro ambony dia mety miditra ihany ny mpandeha Sardinia raha nanao vaksiny sy voasedra ratsy ho an'ny COVID izy ireo, araka ny nambaran'ny Governora Christian Solinas. Amin'izao fotoana izao dia andrasana vetivety ny lalàna, na dia misy fanoherana roa miaraka amin'ireo mpitantana seranan-tsambo sy seranam-piaramanidina aza manohitra izany. Farafaharatsiny farafaharatsiny izao, ny fitsapana swab natao rehefa tonga tany amin'ny toerana itodiana any Italia dia azo atao an-tsitrapo.
Tamin'ny volana septambra lasa teo, ny Sardinian TAR (tribonaly administratera régional) dia nanaiky ny fampiakarana fitsarana nataon'ny governemanta momba ny adidiny hitsapana ny vaovao momba ny coronavirus miditra amin'ny faritry ny faritra, amin'ny fampiatoana amin'ny fomba mahomby ny lalàna navoakan'i Solinas izay nametaka takelaka ho an'ireo mpizahatany tonga teto amin'ny nosy.
Mandritra izany fotoana izany dia tapa-kevitra i Solinas: "Manomboka amin'ny alatsinainy 8 martsa, ireo tonga dia tsy maintsy mitazona fanamarinana manaporofo fa ratsy amin'ny viriosy vita 48 ora alohan'ny hidirana; handalo lalana lehibe izy ireo ary hiala ny seranam-piaramanidina. Ireo izay tsy manana taratasy fanamarinana dia hiatrika fitsapana haingana: raha ratsy dia afaka miditra mora foana izy ireo, raha miabo, dia hipoitra ireo kaody takiana, ary raha tsy misy asyptomatika dia tsy maintsy mankany amin'ny quarantine izy ireo. "
Ny vahaolana dia pasipaoro fanaovana vaksiny: Te hihazona ny fitokana-monina amin'ny bibikely manokana i Solinas amin'ny fiandrasana ny fahavaratra rehefa miomana handray ireo mpizahatany an'arivony ny nosy.
"Tianay ny hiaro ny fahasalamam-bahoaka," hoy ny fanazavan'ny Governora: "Amin'izany dia tsy miaro ny fahasalaman'ny Sardinia fotsiny aho fa amin'ireo olom-pirenena an'arivony maro manerantany izay tonga tany Sardinia mba hiala sasatra."
Rafitra fanaraha-maso ny seranana Sardinia
Mandritra izany fotoana izany dia ilaina ny mandrindra ny rafitra fanaraha-maso ny seranan-tsambo. Ny kaomisera Ares-Ats, Massimo Temussi, tompon'andraikitra amin'ny fitantanana ara-batana ireo lambam-baravarana, dia tokony ho tany Olbia mba hijerena voalohany ireo fotodrafitrasa ireo, raha ny filohan'ny Fahefana ao Rafitra seranan-tsambo Sardinia, Massimo Deiana, dia vonona hiara-hiasa amin'ny tobim-pahasalamana any amin'ny faritra: “Natolotray avy hatrany ny fahafahanay feno, ary misy ny dinika. Tsy ho ela dia hisy ny fizahana: hataonay malalaka ireo toerana sy zotram-piaramanidina ho an'ny mpandeha ao Cagliari, Olbia, Porto Torres, Golfo Aranci, ary Santa Teresa di Gallura. ”
Sarontava sa tsy sarontava? Io no fanontaniana lehibe any Amerika